Isbaarooyin Si Hoose Loo Soo Dhigay Degmada Wadajir, Lacagana Looga Qaado Gaadiidka BL-ka
Home Somali News East Africa Isbaarooyin Si Hoose Loo Soo Dhigay Degmada Wadajir, Lacagana Looga Qaado Gaadiidka...
Iyadoo dhawaan Degmooyinka Gobolka Banaadir laga dhaqan galiyay amarki madaxweynaha Soomaaliya ee ku saabsanaa Isbaarooyinka ayaa waxaa hada soo baxayo meel ay si hoose ugu soo laabteen ciidamada Dowlada, kuwaasoo lacagati baada ah ka qaadaya Gaadiidka BL-ka.
Wadajir waa mid ka mid ah 17 Degmo ee Gobolka Banaadir, waxaana hada lagu dhex arkayaa ciidamada Dowlada oo lacago si hoose uga qaadaya Gaadiidka Dadweynaha, taasoo ay dareemi karaan oo kaliya wadaha Gaadiidka iyo Kirishbooyga.
Xaafada Buula Xuubeey oo ka tirsaneyd meelaha laga qaaday isbaarooyinka ayaa hada lagu arkayaa ciidamada oo lacagaha baada ah ka qaadaya, waxaana ciidamada marki ay qaadayaan lacagaha ay ku qaadayaan qaab xariifnimo ah.
Wadayaasha Gaadiidka ee mara wadadaasi ayaa warbaahinta si hoose ugu sheegay in Ciidamada Dowlada ay ku amraan in lacagaha ay u siiyaan si hoose, hadii kale ay dilayaan, waxayna taasi cabsi galineysa Darwalada Gaadiidka.
Ilaa hada maamulka Degmada Wadajir lama oga inay ka war hayaan iyo inkale, waxaana Gaadiidka isticmaala wadadaasi ay si hoose u bilaabeen inay cabasho sameeyaan, iyagoo ka cabsi qaba in wajiyadooda la arko.
Maleeshiyaadka Dowlada oo wali aan heysasn qaabka iyo nidaamka askarinimo ayaa wali waxa ay wadaan baarashada Dadweynaha iyo Lacagaha Baada ah ee laga qaado Gaadiidka.